Sinnaan | Samfunnskunnskap.no
Sida ay qoysaska kala duwan u doortaan agaasinka hawlahooda iyaga ayay jirtaa. Laakiin fikirka sinnaanta iyo isku-qiimaha waxa laga helayaa sharciyada iyo xuquuqaha. Dhammaan dadka deggan Norwey waa in ay raacaan sharciyadaas. Waxey khusaysaa tusaale ahaan sharciga sinnaanta, sharciga guurka iyo sharciga dhaxalka.
Waxyaabaha ugu qiimaha badan bulshada noorwiijiga waxa ka mid ah in dadku siman yihiin. Taas waxa looga jeedaa in dadku isku qiime yihiin, iyada oo aan loo eegayn, jinsi, da’da, kala dhantaalnimadiisa, dhaqanka uu ka soo jeedo, asalkiisa ama nooca jinsi ee uu qofku yahey. Bulshadu waxey ku dadaaleysaa sidii ey qof kasta u siin laheyd fursad isku mid ah iyada oo loo eegayo xaaladihiisa. Tusaale ku saabsan kuwan waxa ka mid ah, iskuulku wuxuu ardeyda leh kaladhantaalnimo kala duwan siiyaa wax barasho ku haboon, iyo fursadaha barashada afnoorwiijiga ee la siiyo dadka ajinebiga ah, mabda’a ah in shaqada isku midka ah lagu bixiyo mushahar isku mid ah iwm.
Tobankii sanno ee ugu dambeeyey waxa dhacey isbedel weyn oo xagga sinnaanta ragga iyo dumarka ah. Waxaynu aragney isbedelo ka dhacey dhinaca fikirka laga heysto shaqada ragga iyo dumarka iyo kaalinta ey kaga jiraan bulshada, reerka iyo gurigaba.
Sannadihii 1970 yadii waxa si weyn loogu jeestay xuquuqda dumarka bulshada dhexdeeda iyo fursada ey heli karaan waxbarashada iyo shaqada guud ahaaneed. Waxa si weyn u korodhey iney dumarku ka qeybqataan shaqooyinka, maanta dumarka shaqeeya iyo ragga shaqeeyaa wey is le’egyihiin. Lakiin weli waxa jira shaqooyin dumarka u gaar ah iyo qaar ragga u gaar ah. Dumar aad ragga uga badan ayaa ka shaqeeya shaqooyin nus gelinka ah. Maanta ragga iyo dumarka waxbarasho sare leh wey isle’egyihiin, laakiin dumarka badankoodu weli waxey doortaan shaqooyinka lagu yaqaan dumarka. Dumarku waxey inta badan bartaan daryeelka iyo waxbarida, halka ragguna bartaan tiknikada iyo seyniska. Inkasta oo dumarku hadda yihiin ku dhawaad kala badh inta shaqaysa, haddana weli laba ka mid ah saddexdii hoggaamiye ee shaqooyinka ayaa rag ah.
Maanta qoysaska badankooda, siiba kuwa dhallinyarada ah waa caadi inay qaybsadaan shaqada guriga iyo xannaaneynta carruurta labadaba, Laakiin dumarku waqti ka badan ka ragga ayey weli ku isticmaalaan shaqada guriga
Sharciga sinaanta iyo takoorka
Sharciga sinaanta iyo takoorka waxa loo qoray in uu keeno sinaan iyo in uu gaar u kaalmeeyo sidii loo heli lahaa xuquuqda dumarka. Ujeeddada sharciga laga leeyhay waa in la siiyo dumarka iyo ragga fursado isku mid ah dhinaca waxbarashada, shaqada iyo horumarinta dhaqan iyo cilmi ba. Sharcigu wuxu saarayaa dawladdu in ay uga shaqayso si firfircoon sinaanta u dhaxaysa jinsiyada dhammaan dhinacyada bulshada.
Sharciga s wuxuu saarayaa sidoo kale shaqobixiyayaasha iyo ururada suuqa-shaqadu in ay kaga shaqeeyaan sinaanta goobaha shaqada iyo ururada dhexdoodaba. Kala eexaysiga dumarka iyo ragga lama oggola, laakiin kala eexasho lagu gaadhayo sinaan waa la oggol yahay.